भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप बारे
संवैधानिक र लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मडुरोको सरकारको विरुद्धमा भेनेजुएलामा अमेरिकी साम्राज्यवादको योजनामा जुन राज्य विप्लवको प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो मुलत असफल भैसकेको छ । तर पनि त्यसलाई अझै अगाडि बढाउने प्रयत्न जारी छ । त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य दिइसक्नुभएको छ । सरकार पनि भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध उभिइसकेको स्थिति छ ।
वास्तवमा भेजेजुयलामा भइरहेको सत्ताविरुद्धको षड्यन्त्रमुलक गतिविधिहरु छन्, त्यो साम्राज्यवाद र पुँजीवादको विरुद्ध भेनेजुएलाले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभैमिकता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै समाजवादको दिशातिर जान खोजिरहेको प्रयत्नलाई असफल पार्न गरिएको कदम हो ।
भेनेजुयलामा भएको अहिले घटनाक्रम बाह्य हस्तक्षेपलाई हामीले वीरतापूर्वक विरोध गर्नुको पछाडि केही स्पष्ट कारणहरु छन् । पहिलो, विश्वमा रहेका सम्पूर्ण देशहरुको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताको सम्मान गर्छौँ । कुनै पनि देशले कुनै अर्को देशमाथि आक्रमण र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो राष्ट्रिय स्वाधिनता र सावैभौमिकता माथिको आक्रमण हुन्छ र त्यसको वीरतापूर्वक विरोध गनर्सपर्दछ । त्यसैको आधारमा सरकारले पनि भेनेजुएलाको भएको घटनाको सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै बाह्य शक्तिद्वारा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरेको छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट रुपमा भेनेजुएलामा संवैधानिक रुपमा र लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारविरुद्ध जुन प्रकारको गतिविधि भयो त्यसको र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विरुद्ध हामी छौँ भन्ने कुरा दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
हामीले आफ्नो एउटा दृष्टिकोण व्यक्त गर्नुको पछाडि चारवटा कारणहरु छन् । एउटा त राष्ट्रिय सामुहिकताको विरुद्ध, सार्वभौमिकताको विरुद्ध बैदेशिक हस्तक्षेपको कदम देखापर्यो, त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ । यो खाली भेनेजुएलाको मात्र सन्दर्भको कुरा होइन, जुनसुकै मुलुकलाई अर्को मुलुकले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा पनि हामी उठ्छौँ । हाम्रो पार्टीको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवा पनि हो । यो कुनै नयाँ नीति होइन । त्यसैकारणले यसलाई के–के नै भयो भनेर बुझनु पर्ने कुरा होइन । बरु यसबाट विचलित भयो भने चाहीँ ‘के हुन लागेछ कम्युनिष्ट पार्टी रु’ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा बाहिरी हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो हस्तक्षेपका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु कुनै पनि देशको कम्युनिष्ट पार्टीको, कुनै पनि देशका जनताहरुको न्यायपूर्ण शक्तिरुको कर्तव्य हुन आउँछ ।
भेनेजुएलामाथि किन हस्तक्षेप गरियो त रु साम्राज्यवादको पूँजीवादको विरुद्ध ऊ लड्यो, टिक्न खोज्यो, त्यसैकारणले हस्तक्षेप भयो । त्यसैले यो वर्ग र विचारधाराको लडाइँ पनि हो । यसमा हामी साम्राज्यवाद र पुँजीवादको विरुद्ध समाजवादी विचारधारा र श्रमजिवी वर्गको पक्षको लडाईमा उभिन्छौँ, उभिनै पर्छ ।
दोस्रो कुरो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिको पक्षमा उभिएर लोकतन्त्रको नाममा निरङ्कुशता लाद्ने, फासिवाद लाद्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध पनि उभिएका हौँ । भेनेजुएलामा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचनबाट निकोलास माडुरो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । संवैधानिक रुपले सपथग्रहण गरेका छन् । त्यस पछाडि योजनाबद्ध रुपमा उभाएर अर्को राष्ट्रपति घोषणा गराएर जसरी त्यसलाई मान्यता दिने क्रम सुरु गराउन खोजियो, त्यसले के देखाउछ भने साम्राज्यवादी र पुँजीवादीहरुको शक्तिको लोकतन्त्र सामान्य अवस्थाको लोकतन्त्र मात्रै हो । विशेष अवस्थामा आफ्नो वर्ग, स्वार्थलाई सरोपरी राखेर उनीहरुले लोकतन्त्रलाई च्यातचुत पार्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ देखापरेको छ । त्यसकारणले त्यहाँ वास्तवमा लोकतन्त्रको निमित्त भेनेजुएलामा होइन । लोकतन्त्रको विरुद्ध भेनेजुएलामा हस्तक्षेप भएको हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट संवैधानिक रुपले निर्वाचित सरकारको विरुद्ध असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले कुनै गतिविधि गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नु भनेको लोकतन्त्रको विरुद्ध हस्तक्षेप पनि हो ।
तेस्रो कुरा यो विचार धारा र वर्गको लडाइँ पनि हो । भेनेजुएलामाथि यसप्रकारले हस्तक्षेप, षड्यन्त्र किन गरिँदै छ रु साम्राज्यवादको नाइके अमेरिकाले भेनेजुएलालाई टिक्न नदिने गरी प्रयत्न गरेको अहिले मात्र होइन । सम्पूर्ण घेराबन्दी षडयन्त्रको विरुद्ध जनताको बलमा समाजवादको दिशामा उन्मुख हुँदै भेनेजुएलाले त्यहाँको समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा आफ्नो अग्रगमनको यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको छ । यसरी त्यहाँ एउटा समाजवादी विचारधारा छ । त्यहाँ एउटा श्रमजिवी वर्गको स्वार्थ छ । समाजवादी विचारधारा र श्रमनिवी वर्ग र पुँजीवादी विचारधारा र साम्राज्यवाद पक्षधरबीचमा ठूलो संघर्ष भइरहेको छ । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेप समाजवादी विचारधारा र श्रमजिवी वर्गमाथिको हस्तक्षेप हो । त्यस्तो सन्दर्भमा हामी कसको पक्षमा लिने रु समाजवादी विचारधारा र श्रमजिवी वर्गको पक्ष लिने कि पुँजीवादी विचारधारा र साम्राज्यवाद र पुँजीवादको पक्ष लिने रु यो हाम्रो लागि गम्भिर महत्त्वको विषय हो ।
यिनै चार कारणले गर्दा भेनेजुएलामा भएको हस्तक्षेपको विरुद्ध हाम्रो पार्टी छ । कतिपय कम्युनिष्ट भन्नेहरुले नै भनिरहेको देख्छौँ हामी यति टाढाको देशको बारेमा किन बोल्नुपर्यो ? तर, कुरा नजिक वा टाढाको होइन । कुरा मूल्य र दृष्टिकोणको हो । कुनै पनि देशले अर्को देशलाई हस्तक्षेप गर्न पाउने कि नपाउने ? लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने की नउभिने ? हरेक देशका जनताले आफ्नो फौसला आफै गर्न पाउने कि नपाउने ? यो लोकतान्त्रिक ढंगले आफ्नो सरकारलाई निर्वाचित गर्न पाउने पक्षमा छौँ कि छैनौँ हामी ?
भेनेजुएलालाई किन यति धेरै महत्व दिनुपर्ने प्रश्न पनि छ । भेनेजुएला साम्राज्यवाद र पुँजीवादको पनि विरुद्धमा छ र समाजवादको पक्षमा छ । भेनेजुएला आफ्नै ढङ्गले समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको देश हो । हामीले बनिबनाउ सुत्रको आधारमा मात्र क्रान्तिको मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । क्रान्तिको ऐतिहासिक वस्तुगत नियमहरु छन् । भौतिकवादी नियमहरुको आधारमा हामीले विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै सुत्रहरुको मात्र आधार होइन । त्यसकारण भेनेजुएलामा लेनिनले भन्नुभएको जस्तो कुनै शुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति हुने र सम्पूर्ण राज्ययन्त्रका संरचनाहरु कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको शक्तिले कब्जा गरिसकेपछाडि सत्ताको गुणात्मक रुपान्तरण हुने र शक्ति सम्पन्न हुने प्रक्रियालाई हुबहु हामीले त्यहाँ देख्न पाउँदैनौँ । ह्युगो चाभेजको नेतृत्वको पार्टी आफैमा कम्युनिष्ट पार्टी होइन । त्यो समाजवादी पार्टी हो । त्यसकारणले खाली क्रान्तिलाई शुद्धतामा हेर्ने र शुद्ध क्रान्तिको कल्पना गर्ने काम गर्यो भने त्यो गल्ती हुन्छ । भेनेजुएला समाजवादी क्रान्तिकै पक्षमा छ । आफ्नै मोडेलको आफ्नै ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेको छ ।
‘तपाईं किन माक्र्सवादी नहुनुभएको भनेर ? ,’ सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले आफूलाई माक्र्सवाद भन्नलाई माक्र्सवादको दह्रो अध्ययन गरेको छैन ।’ हामीले समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य र अहिलेको समाजवाद उन्मुख समृद्धिको लक्ष्यलाई भुल्यौँ भने हामी कम्युनिष्ट नै बाँकी रहदैनौँ । कम्युनिष्टहरुले कम्युनिष्ट कर्म नै नगर्ने हो भने कम्युनिष्ट नै चाहिँदैन । त्यसैले नाममात्रको कम्युनिष्ट हुनुभएन । हामी सच्चा कम्युनिष्ट नै भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
हामी माक्र्सवादको दुई चारओटा लाइन रटेपछि माक्र्सवादी भइहाल्छौँ । त्योभन्दा पनि अर्को महत्वपूर्ण वहाँले भन्नुभयो, ‘यसले हामीलाई जडसुत्रवादबाट बचाउन सहयोग गरेको छ । माक्र्सवादी भइसकेपछि माक्र्सले के–के भनेको छन् त्यही सत्य हुने, बेठीक भए पनि ‘बुढोले भन्देको’ कुरा भन्नुपर्ने । हामी त्यस्तो समाजवादी हौँ । माक्र्सवादको मूलभूत कुरालाई आत्मसाथ गर्छौँ । तर आफूलाई माक्र्सवादी र कम्युनिष्ट नभनेको हुनाले त्यसका गल्ती र कमजोरीबाट सजिलै मुक्त हुन सक्छौँ । त्यो भन्दा बाहिर पनि राम्रा कुरा छन् भने हामी त्यसलाई सहजै आत्मसाथ गर्न सक्छाँै । त्यसैले यो कारण हामी जडसुत्रवादी भएनौँ । माक्र्सवादको सकारात्मक सबै कुरालाई आत्मसात गर्ने र माक्र्सवादभन्दा बाहिर हिजो कम्युनिष्टहरुले विरोध गरेका कतिपय सकारात्मक चिजहरुलाई पनि हामीले आत्मसाथ गर्न सक्छौँ ।’ त्यही अनुसार उहाँले समाजवादी धारामा आफूलाई अगाडि लैजान प्रयत्न गर्नुभयो । साम्राज्यवादी अमेरिकाको नाकै साढे चौध वर्ष पेचिलो सङ्घर्षको बीचमा समाजवाद उन्मुख राज्य सञ्चालन गरेर समाजवादको खुला लक्ष्य घोषणा गरेर अघि बढ्नुभयो । आज निकोलास मडुरो पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहनुभएको छ र उहाँले पनि समाजवादकै पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ । समाजवादी पार्टीले पनि आफूलाई समाजवादकै पक्षमा उभ्याएको छ । चाभेजको उत्तराधिकारी निकोलस माडुरोलाई जनताले निर्वाचित गरेका छन् । त्यसैले साम्राज्यवाद र पुँजीवादी शक्तिहरु उनको सत्ताको विरुद्धमा धावा बोलिरहेको छ । त्यो वास्तवमा समाजवादी विचारधारा र समाजवादी यात्राको विरुद्ध हमला हो । त्यसकारणले हामीले यसलाई गम्भिरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ ।
भेनेजुएलमा एउटा निर्वाचित सामुदायिक परिषद् छ जसले त्यहाँको सम्पूर्ण तलको कामहरुको नेतृत्व गर्छ । अर्को प्रतिक्रान्ति, साम्राज्यवाद र पुँजीवाद विरुद्ध एउटा शक्तिको रुपमा बोलिभोरियन कमिटी भनेर गठन गरिएको छ । एउटा सम्पूर्ण जनताहरको परिषद छ जसलाई कम्युनिटी काउन्सिल भनिन्छ । यसले सम्पूर्ण जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने काम हेर्छ । बोलिभेरियन कमिटीको रुपमा तल एउटा कमिटी छ जसले युवा शक्तिलाई संगठित गरेको छ ।
सम्वाद डबलीमा आयोजित भेनेजुएलासँग ऐक्यवद्धता शीर्षकको अन्तक्रियामा नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादीत अंश ।
Times 995748	Visited.